IQela le-Hockey lase-United States lika-1980
Midlalo I-Best Hockey ye-Ice
Bayabaphi abagijimi emva kweMinyaka ye-1980 iMangaliso kwi-Ice?
Ummangaliso kwi-Ice , loo iqela eliyingqungquthela le-hockey lama- Olympic lika -1980 elibamba iqela kwi-XIII Yemidlalo Yobusika-phakathi kwabo bawubonayo, ngubani ongakulibala? Nantsi into eyenzekayo kwaye ukugqithisa kubadlali abaye benza ukuba kwenzeke.
Ibali Emva Kokumangalisayo Ngeqhwa
Imfazwe yeHlabathi yayiphila kwaye ngoFebruwari 1980 njengoko iiSoviet zalwa e-Afghanistan. Kodwa izixhobo zafakwa eceleni kweMidlalo yeOlimpiki eyayibanjelwe eLake Placid, eNew York loo hlobo lonyaka.
I-United States yathumela iqela labafundi beekholeji bephuma kwiqhwa, iqela elincinane kunazo zonke ezenzeka kwiimbali ze-Olimpiki zase- US. Iqela leSoviet Union liququzelelwe ngabadlali bezemidlalo okwethutyana ngokukhawuleza ngokuthi "abadlali" ngenxa yemidlalo. Leli qela lase-USSR liye lahlazisa ngokupheleleyo abafundi base-US nje ngeveki ezimbalwa ngaphambili kwimidlalo yomboniso eMadison Square Garden.
I-Lake Placid matchup yayinayo yonke into ephawulekayo yegazi, kodwa iqela lase-US libetha iRashiya kule ntla nganiso, ekugqibeleni lilahla iiSoviets zegolide yegolide bonke abantu ababeqiniseke ukuba baya kufikelela. Kodwa iMangaliso kwi-Ice yayingeyona nto imidali yegolide. Yayiyimidlalo yokuqala yomrhumo.
AmaMelika, iiSoviets, iFinland neSweden zonke ziqhubele phambili kwiingcamango kwiimidlalo. Ukuphumelela umdlalo ngokumelene neRashiya kwazuza amanqaku amabini e-US, kodwa kwakungaze kube lula ukukhupha. Amaqela ayeboshwe 2-2 ekupheleni kwexesha lokuqala.
I-US yayinomdla kumdlalo, into eninzi "ingcali" ayengakaze iphupha. I-Russia yahamba phambili ngelixa lesibini, ekhokelela ku-3-2. Emva koko ama-amateurs ase-United States afake iinjongo ezimbini kwixesha lesithathu ukufezekisa umgca we-4-3. Baxhomekeke ekuphumeleleni umdlalo.
Inkqubo yePoints and Medal Gold
I-US ibesele idibene neSweden kwimidlalo yangaphambili kumjikelezo, izuza enye ingongoma.
I-Russia ibetha iFinland, ifumana amanqaku amabini. Emva koko kwafika isimangaliso kwi-Ice kunye nabadlali be-hockey base-US ngokumangalisa umhlaba. Ukuphumelela kwanikela i-US ingqikithi yamathathu, kwaye ukulahlekelwa kwabo kumaMerika washiya i-USSR kusekho ngamacandelo amabini kuphela.
Emva koko iRussia yabetha iSweden ezimbini iintsuku kamva, iqukumbela iingongoma ezine ezaziza kutshaya iU.SA ukuba amaMerika alahlekelwa yiFinland. Ukulahleka okunjalo kwe-US kwakuye kwashiya iRashiya ngamanqaku amane kunye ne-US eneemithathu.
Kodwa oko akuzange kwenzeke. I-US ibetha iFinland, ifumana amaphulo amabini, ibanike amahlanu ngokumelene neRashiya emine. AmaMerika athatha ekhaya indondo yegolide. AmaSoviet athola isilivere.
UJim McVay, obamba i- World Wide yezemidlalo ye-ABC ngelo xesha, ebizwa ngokuba yiMelika ye-4-3 Miracle kwi-Ice ukunqoba kumaRussia "eyona nto idangeleyo kwimbali yezemidlalo." Kwaye, ke, u-Al Michaels wenza iimbali ngokwakhe xa ekhwaza ngexesha le-ABC, "Ngaba ukholelwa kwimimangaliso? Ewe!" I-Sports Illustrated yathi ukuphumelela kuba yimpumelelo yezemidlalo yekhulu lama-20.
Ngoko obani aba bantu, abadlali be-hockey base-American amateur college level? Nazi amagama abo, zidweliswe zizikhundla zabo, ubudala babo ngo-1980, zabo iidolophu zabo, kunye neekholeji zabo kwiibakaki.
UJim Craig, 21
USteve Janaszak, 22
UBill Baker, 22
Grand Rapids, MN (eMinnesota)
UDave Christian, 20
I-Warroad, iMN (North Dakota)
UKen Morrow, 22
UJack O'Callahan, 22
UMike Ramsey, 19
Minneapolis, MN (eMinnesota)
UBob Suter, 22 Madison, WI (Wisconsin)
Roseau, MN (eMinnesota)
UStephen Christoff, 21
UMike Eruzione, 25 (uCaptain)
UVirginia, MN (eMinnesota-Duluth)
UMark Johnson, 21
URob McClanahan, 22
UMarko Pavelich, 21
UEvaleth, MN (eMinnesota-Duluth)
UDave Silk, 21
UEric Strobel, 21
St Clair Shores, MI (Bowling Green)
Championships yeHockey World
I-Wayne Gretzky Record Book
Ukuchaza ixesha lomdlalo weHockey Olympic
Uninzi lweNdebe yeStanley iwina ngabadlali
I-North American Common Black Locust
I-Top 10 uBruce Springsteen Iingoma zee-80s
I-Narmer Palette: Izopolitiko kunye noGonyamelo kwiYiputa yaseMpumalanga
Indlela yokudiliza i-8-Ibhola yeBhola evulekile
Iqoqo leengcaphuno kumaMama noMama
I-Tech Tech GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Isikhokelo seStaccato Articulation
Indlela Yokuba I-Politically Active phambi Kokukhethwa
Indlela yoba nguTitshala oPhezulu weSikolo soTitshala